FANTATRO NY TANJOKO – Blaogin'i Voniary
Izay tsy manana tanjona ihany no sasatra manenjika ny hafa. Rehefa mametraka tarigetram-piainana manko ianao dia tsy maintsy hifofotra hanao izay hanatrarana azy ka tsy hanam-potoana iheverana izay ataon’ny hafa. Izay tsy mametraka tanjona mazava koa dia tsy mahita izay aleha sady tsy tonga na aiza na aiza satria rehefa be loata ny ierehan’ny saina dia tsy misy zava-banona.
Atao inona moa tanjona?
Rehefa tsy misy tanjona voafaritra mazava ianao dia tahaka ilay Kapitenin-tsambo noresahintsika tamin’ny farany. Nanana tondro avaratra hafa kely manondro ny làlana ahatongavana amin’izay zavatra na olona iriny indrindra izy ary nahomby hatrany hatrizay. Nisy fotoana anefa nihodinkodina fotsiny ny fanjaitra lehibe tamin’ilay fitaovany satria tsy nazava ny tian’ilay kapiteny ahatongavana: sady te-hahita ilay andriambavilanitra nambabo ny fony izy no te-hifanehatra amin’ireo tafi-panjakana nanenjika azy. Tsy vitan’izany fa te-hitsoaka lavitra ilay fahavalo tantsambo nampivarahontsana azy koa izy sady te-hahazo ilay harena miafina. Vokany, tsy nandeha amin’ny laoniny ilay tondro avaratra satria betsaka loatra (efatra be izao!) ny tanjona tian’ilay kapiteny hotratrarina tao anatin’ny indray mitoraka.
Inona ary ny tanjoko?
Ny tanjona dia vokatry ny faniriana lalina anaty. Mety apetraky ny fiarahamonina, ny ray aman-dreny, ny kolontsaina sy ireo hery hafa ivelan’ny tenanao izy io. Ny tsara ho tadidinao anefa dia ny hoe miainga ao aminao ihany ny hery fototra anatraranao io tanjonao io. Tsy maintsy baiko avy amin’ny fanahinao, ny sainao sy ny fonao na ny iray amin’izy telo ireo vao afaka manatanteraka ny vatanao. Mahomby ianao rehefa izy telo ireo no miara-manaiky ilay tanjona ka mifarimbona mitarika sy manome hery ny vatana. Izany no antony mahatonga ny ray aman-dreny miteny hoe “ny fianarana aloha rankizy imasoana izay vao manao sipasipa izany!” satria tiany hampifantoka ny momba azy rehetra amin’ny any an-dakilasy ny zanany mba ho tafita. Izany koa no mahatonga ny fitenenana hoe sarotra ny manenjika bitro roa satria mety samy hanana ny lalany ny bitro ka tsy maintsy misafidy iray ianao raha tsy te-ho votsi-droa.
Ahoana no amaritako ny tanjoko?
Noho izany, antoky ny fahombiazanao ny fisian’ny tanjona. Azonao atao ny mametra tarigetram-piainana iray lehibe toy ny nataon’i Salomona Mpanjaka. Ho azy, fahendrena no napetrany ho lohalaharana tamin’ny fiainana ka io zavatra tokana io, tsy nisy ankoatra io, no nangatahany tamin’Andriamanitra. Avy eo, zarazarao isan-tsokajiny izay fomba anatraranao io tarigetram-piainana io: tanjona ara-kasa, tanjona ara-pahaizana, tanjona ara-tokantrano, tanjona ara-pialamboly sy ny maro hafa. Tsy ho tratranao ao anatin’ny indray mitoraka koa anefa ireo fa mandeha tsikelikely. Ezaho ary ny mametraka tanjona isan’ambaratonga toy ireny miakatra amin’ny tohatra ireny. Mampahomby koa ny fahaizana mandamina ny tanjona ara-potoana: tanjona ho an’ny anio, tanjona ho an’ny herinandro, tanjona ho an’ny volana, tanjona ho an’ny taona eny hatramin’ny tanjona lavitra ezaka aza.
Izao no tokony nataon’ilay Kapitenin-tsambo dia azo antoka fa nahomby izy: nisafidy tanjona iray tao anatin’ireo efatra, izay tena sarobidy aminy indrindra izy mba hotratrarina voalohany. Avy eo manaraka miandalana eo ny telo ambiny satria làlana iray ihany manko no azon’ilay tondro avaratra aseho. Fehiny: ilaina ny mametraka laharam-pahamehana amin’ireo tanjonao.
manana tanjona, mpandresy aho, mpandresy ianao, tanjona mazava, tarigetram-piainana, toe-tsaina mpandresy
Ny Teny Malagasy : Fanentanana ny Fon’ny Vahoaka amin’ny Fampandrosoana (Tapany I)